Global Connect Asia : Blogs
Latest Event Tech Trends & Digital Insights
Manufacturing ဆိုတာ ဘာလဲ? Odoo ERP Myanmar Manufacturing System Manufacturing ဆိုတာ ကုန်ကြမ်း (Raw Materials) ကနေ ကုန်ချော (Finished Goods) အထိ စက်ပစည်း အဆင့်ဆင့်၊ Process အဆင့်ဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်းပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Manufacturingဆိုတာ ထုတ်ကုန်အစမှအဆုံးတိုင် Processes တွေအဆင့်ဆင့်အကုန်လုံးကို value-added ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဟိုး ... အရင်တုန်းက Event Planner တွေဟာ ပွဲတွေမှာ Paper နဲ့ ပဲ registeration form တွေကို ဖြည့်စေတယ် ၊အသုံးပြုစေတယ် ။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းကို နောက်ကျနေပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့Event Planner တွေအနေနဲ့ခေတ်မှီဆန်းသစ်ပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူတဲ့ Event Management software တွေကို အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ် ။ Okay ... လူကြီးမင်းမှာ လာမယ့်အပတ်အတွက်...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နဲ့ အသေးဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ On paper နဲ့ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အချိန်ကြာတာတွေ၊ စာရင်း လွဲမှားတာတွေရှိတတ်တော့ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး တိကျမှန်ကန်တဲ့ ERP system ကိုသုံးဖို့ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ERP ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်လိုတွေ အသုံးဝင်လဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံးသိဖို့ လိုအပ်လာပ...
Human Resource Management System (HRMS) Organization တစ်ခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့် System တွေလည်း လိုအပ်လာပါပြီ။ ဆိုတော့ ဘယ် System တွေက မိမိတို့Organization အတွက် ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုသင့်သလဲ ?
လူကြီးမင်းတို့ Events များတွင် ပွဲအစမှအဆုံးတိုင် အစီစဉ်ကျဖို့ အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ ? လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ Business Partner တွေ အစရှိသဖြင့် ဖိတ်ကြားလွှာတွေ ဖိတ်တယ်၊ ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေတက်တယ် ဘယ်သူတွေကတော့ မတက်ဘူး ဆိုတဲ့စာရင်းတွေ၊ တစ်ချို့ ဆိုရင် ဖိတ်စာတွေက အစောကြိုပို့ ထားတဲ့အတွက် ပွဲရက်က်ို မေ့နေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ၊ ပြွဲ...
Global Positioning System လို့ ခေါ်တဲ့ GPS က်ို အားလုံး ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ GPS ကို ဘာကြောင့် သုံးကြသလဲ ??? . . . Okay , GPS vehicle Tracking System (GPS in Myanmar) ကအားလုံးအတွက် အရေးပါပြီး အသုံးဝင်တဲ့ system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ GPS in Myanmar က လမ်းပျောက်နေသည့် အခါ ၊ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာတွေကို ရှာသည့်အခါ တိကျတဲ့ location, distance နဲ...
Online Event Ticketing System in Myanmar EVENT MARKETING AUTOMATION AT YOUR FINGERTIPS (အလိုအလျောက် ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း) ပြီးပြည့်စုံပြီး အောင်မြင်တဲ့ပွဲတစ်ခု ဖြစ်မြောက်ဖို့ရာအတွက် မည်သည့်အချက်တွေလေ့လာထားရမည်ဆိုသည်ကို သင်သိပြီးပီလား..... GEVME Email marketing တွင် မည်သည့် device အမျိုးအစားနှင့်မဆို ကြည့်ရှုရလွယ်ကူသော Email Campaign များ...
Global Connect Asia ERP Myanmar Odoo ၏ Accounting Module အကြောင်းကို အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ Finance Accounting သို့မဟုတ် Financial Accountancy ဆိုသည်မှာ Accountingနှင့် သက်ဆိုင်သော Financial Transactions များကို ရေးမှတ်၊ မှတ်တမ်းတင်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးဝင်လွယ်ကူစေရန်၊ Analysis လုပ်ရန်၊ လိုအပ်သော Financial...
HRMS ဆိုတာ မည်သည့် organization အတွက်ကိုမဆို လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်သော System တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ organization အတွက် human resource တွေကို သင့်လျော်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်(Manpower) နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု(Skill) ပိုင်းများ မှန်မှန်ကန်ကန် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ HRMS သည် အရေးအကြီးဆုံး အခန်းဂဏ္ဍ တစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်နေပါတယ်။ HRMS တွေအမျ...
GCA GPS for Myanmar
GPS ဆိုတာကတော့ Global Positioning System ကိုအတိုကောက်ခေါ်တဲ့ နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Orbiting Satellite လို့ခေါ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲကိုလွှတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တု ကွန်ယက်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပီး တည်နေရာကိုတွက်ချက်ဖော်ပြပေးတဲ့ Systemလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ "Global Connect Asia" က Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့"GCA GPS" အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။